Safarka Boosniya iyo Herzegovina Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Bosnia iyo Herzegovina waa waddan Yurub ah oo ku yaal jasiiradda Balkan. Waxay ka tirsanaan jirtay Galbeedka Balkans laakiin waxay xornimada qaadatay 1992. Waxay xuduud la leedahay Croatia waqooyiga, galbeedka iyo koonfur galbeed, Serbia oo bariga ka xigta iyo Montenegro oo koonfur bari ka xigta. Badanaa buuraley, waxay marin u leedahay qayb yar oo ka mid ah xeebta Badda Adriatic ee koonfurta.
Sarajevo - caasimada qaranka; magaalo yurubiyan ah oo cosmopolitan ah oo leh qallooc gaar ah oo reer bariga ah sida lagu arki karo kala duwanaanshaheeda ballaaran ee qaababka dhismaha
Banja Luka - waa magaalada labaad ee ugu weyn, oo u adeegta caasimadda Republika Srpska, oo leh aragtiyo taariikhi ah iyo nolol hodan ah
Bihać - waa magaalo u dhow xadka Croatia, waxaa ku hareeraysan dabeecad cajiib ah
Jajce - waa magaalo yar oo leh biyo -dhac aad u qurux badan iyo tiro soo jiidasho taariikhi ah oo ku dul -wareegsan Xarunta
Mostar - magaalo qurxoon oo duug ah oo ku taal Wabiga Neretva, waxaa astaan ​​u ah buundada dhexe
Neum - waa magaalada kaliya ee xeebta leh, leh xeebo bacaad leh oo ay taageerayaan buuro dhaadheer
Tuzla - waa magaalada seddexaad ee ugu weyn oo leh warshado badan, in kasta oo ay leedahay magaalo qurxoon oo duug ah iyo astaamo dagaalkii naxariis darrada ahaa sidoo kale
Teslic - а health spa Resort oo leh awooda dalxiis ee ugu weyn dalka
Zenica - magaalo leh rubuc qadiim ah Ottoman
Kozara - Beerta qaran ee woqooyi-galbeed oo leh keymo cufan iyo seero buuro leh, meel tamashle iyo ugaarsi.
Međugorje - waa magaalo u dhexeysa buuro leh cimilo fudud oo badwayn ah, laakiin laga yaabee in sida ugu wanaagsan loo yaqaan ay tahay sheegashada muuqaalka Maryan Virgin ee lix qof oo deegaanka ah.
Srebrenica - waa magaalo yar oo ku taal woqooyi-bari, dabeecad qurux badan (webiga saddexaad ee ugu qoto dheer, wabiga Drina ee adduunka), oo sida ugu wanaagsan loogu yaqaan goobtii xasuuq ka dhacay intii lagu jiray Dagaalkii Bosnia.
Jahorina ee loo dalxiis tago
Dalxiis barafka Bjelašnica
Hordhaca Bosnia iyo Herzegovina
Fikradda dhalashada Bosnia waxaa loo adeegsadaa in badanaa lagu dabaqo Muslimiinta muslimiinta ah, sidoo kale loo yaqaan Bosniaks. Reer Bosnia ee reer Croatia iyo Serbia waxay eegeen Croatia iyo Serbia siday u kala horreeyaan hagitaan ahaan iyo waddankii waalidka ahaa oo labaduba waxay lahaayeen himilo midnimo siyaasadeed oo ay la yeeshaan midkood Croatia ama Serbia mar haddii midowgii Yugoslavia uu bilaabay inuu burburo horaantii 1990s. Tani dabcan waxay masiibo u horseeday gobolka Bosnia iyo Herzegovina, taasoo dhalisay dagaal sokeeye oo dhiig badan ku daato oo dhexmaray seddexdii kooxba. Dhamaadkii isbahaysiga Bosnia-Croatia ayaa kula dagaalamay ciidamadii Serbia dhulka halka NATO ay cirka ka weerartay Serbiyiyiintii reer Bosnia, taas oo u horseeday guul daro militari Serbia. Heshiis nabadeed ayaa xigay, iyadoo si qoto dheer loo baaray Maamulka Clinton ee Mareykanka oo gacan ka geysanaya xiridda heshiiska. Natiijadu waxay noqotay in Bosnia iyo Herzegovina ay noqon doonaan federaal ka kooban cutub ka tirsan Bosnian-Kroatiyaanka oo ay weheliyaan cutub ka tirsan ismaamulka Serbia. Waxyaabaha si dhakhso leh ayey u soo fiicnaadeen tan iyo markaas laakiin labada gobol ee Bosnia iyo Herzegovina weli waxay haystaan ​​waddo dheer oo ay ugu sii socdaan midowg siyaasadeed iyo bulsho oo dhammaystiran. Bosnia iyo Herzegovina waxay u shaqeeyaan sidii hal waddan oo leh laba ama xitaa saddex qaybood oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, dowladda dhexe waxay ku taal Sarajevo waxaana jira hal lacag oo guud, calaamadda la beddeli karo, mararka qaarkoodna laga sheego gudaha KM lacag la magacaabay ka dib oo mid mid loogu xidhay Deutschemark oo lagu beddelay euro sanadkii 2002dii Germany.
Dhaqanka & Dhaqanka Bosnia iyo Herzegovina
Bosniaks, Croatia iyo Seerbiyaanka ayaa ah kooxaha ugu tirada badan wadanka. Tan iyo burburkii Yugoslavia, Bosniak ayaa bedelay Muslim iyada oo ah erey qowmiyadeed qayb ahaan si looga fogaado in lagu jahwareeriyo erayga diiniga ah ee Muslim - oo ku dhegan diinta Islaamka. Qowmiyadda iyo diinta ayaa inta badan isdabamarinaysa; oo leh Muslimiin (inta badan Bosniaks), Masiixiyiin Katoolik ah oo Roman ah (inta badan reer Croatia) iyo Masiixiyiin Orthodox ah (inta badan Seerbiya) oo ah saddexda koox diimeed ee ugu waaweyn dalka. Waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah Roma, Brotestanka iyo Yuhuudda sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, waddanku waa mid aad u cilmaani ah diinta waxaa loo arkaa inay ka badan tahay astaan ​​dhaqameed iyo mid dhaqameed marka loo eego nidaamyo iyo xeerar.
Cimilada Bosnia iyo Herzegovina
Kulayl kulul iyo jiilaal qabow; meelaha sare waxay leeyihiin waqti gaaban, xagaaga qabow iyo jiilaal daran, daran; jiilaal qabow, roobab xeebeed
Isdaba joog ah buuro leh waxoogaa faragelin ah oo dooxooyinka waxtar leh. Waxaa jira dhul gariir marmar meesha ugu sareyso waa Maglić oo ah 2,386m.
Wadamada buluuga ah waxay fiiso la’aan ku heli karaan Bosnia iyo Herzegovina
Dadka haysta Baasaboorka dalalka soo socda uma baahna fiiso ay ku galaan Bosnia iyo Herzegovina marka ujeedka booqashadu tahay dalxiis ilaa 90 maalmood (haddii aan si kale loo sheegin): Albania, Antigua iyo Barbuda, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Brazil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Kolombiya, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Holy See, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Jasiiradaha Marshall, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Waqooyiga Macedonia, Norway, Cumaan, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia (30 maalmood), Saint Kitts iyo Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent iyo Grenadines, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Timor-Leste, Trinidad iyo Tobago, Turkey, Tuvalu, Yukreeniyaan (30 maalmood), Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Ingiriiska, United States, Uruguay, Vanuatu iyo Venezuela.
Muwaadiniinta wadamada soo socda ayaa geli kara oo joogi kara 90 maalmood wata kaarkooda Aqoonsiga Qaranka: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Waqooyiga Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Qof kasta oo aan daboolin mid ka mid ah ka-dhaafitaannada fiisaha ee kor ku xusan wuxuu u baahan doonaa inuu fiiso ka dalbado safaarad ama qunsuliyadda Bosnia iyo Herzegovina ka hor. Si kastaba ha noqotee, ansax ah kuwa haysta fiisooyinka soo galitaanka iyo deganayaasha Midowga Yurub, waddamada xubnaha ka ah Aagga Schengen, iyo United States of America waxay soo gali karaan Bosnia iyo Herzegovina fiiso la'aan fiisada ugu badnaan joogista 30 maalmood. Tani ma khusayso dadka haysta baasaboorka Kosovar ..
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka dhaafida fiisaha iyo nidaamka dalabka fiisaha waxaad ka heli kartaa websaytka Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
U duuli Bosnia iyo Herzegovina
Madaarka Sarajevo () wuxuu ku yaal agagaarka Butmir wuxuuna aad ugu dhow yahay Xarunta Magaalada. Ma jiro gaadiid dadweyne oo toos ah, iyo tigidhada taga/ka imanaya madaarka ayaa si la yaab leh qaali ugu ah masaafada gaaban - sharadkaaga ugu fiican ayaa ah inaad taksi u raacdo boosteejada taraamka Ilidža oo raac taraamka qaybta ugu dambeysa ee safarkaaga, qiimaha KM1.80)
Diyaaraddaha Croatia waxay isku xiraa Sarajevo iyada oo sii marineysa Zagreb ugu yaraan laba jeer maalintii, halkaasna waxaa suuragal ka ah isku xirnaanta Brussels, Frankfurt, London, Munich Paris, Zürich iyo magaalooyin kale oo Yurub ah.
Air Serbia waxay isku xirtaa Sarajevo maalin kasta iyada oo loo sii maro Belgrade (oo leh adeeg subax hore-subax hore), halkaasna qofku wuxuu kula xiriiri karaa duulimaadyada kale ee Air Serbia gudaha iyo dibedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha kale ee duulimaadyada ee sida joogtada ah u shaqeeya (maalin kasta) Sarajevo waxaa ka mid ah:
Adria Airways ilaa Ljubljana
Lufthansa ilaa Munich
Austrian ilaa Vienna
Turkish Airlines ilaa Istanbul
Noorweey waxay furtay waddo cusub oo ka timaadda Sarajevo ilaa Stockholm-Arlanda bishii Meey / Juun 2009. Toddobaadkiiba laba duulimaad baa jira. Adeegyada kale, ka eeg bogga Madaarka Sarajevo.
Inta badan (), Tuzla () iyo Banja Luka () sidoo kale waxay leeyihiin garoomo diyaaradeed oo caalami ah, oo leh adeegyo ka imanaya Istanbul, Frankfurt, Zürich, Ljubljana, Basel, Malmö, Göteborg iyo Belgrade.
Dad badan oo safar ah waxay doortaan inay u duulaan Croatia, iyagoo sii socda safarkooda baska ee tagaya BiH, Zagreb, Split, Zadar ama Dubrovnik, labada dambe waxaa u adeegta duulimaadyo xilliyeed raqiis ah oo dalxiis.
Tareen ugu raac Bosnia iyo Herzegovina
Adeegyada tareenka ee guud ahaan dalka si tartiib tartiib ah ayey mar labaad u soo hagaagayaan, in kasta oo xawaareyaasha iyo isdaba joogtu ay weli hooseeyaan. Inta badan kaabayaasha tareenka waxyeello ayaa soo gaadhay intii lagu jiray dagaalladii 1990-meeyadii, khadadka ayaa loo furay si mudnaan leh, in kasta oo aan la gaadhsiin heerkii ugu sareeyay ee adeegga dagaalka ka hor. Adeegyada tareenka waxaa ka shaqeeya labada hay'adood oo kala duwan (oo ku saleysan kala qeybsanaanta siyaasadeed ee dalka), taas oo keeneysa in tareennada tareennada la beddelo inta badan.
Ku socota / ka yimaada Croatia
XUSUUS: Tareenka Zagreb-Bosnia ayaa umuuqda in la joojiyay laga soo bilaabo Diseembar 2016 illaa ogeysiis dheeri ah. Xigasho: Kursiga 61
Waxaa jira hal tareen maalinle ah oo ka socda Sarajevo ilaa Zagreb (10 saacadood), caasimada Kroatia, iyo usii gudbaya Yurub inteeda kale. Tareenka 'maalin' wuxuu ka baxayaa Zagreb 08:59 AM wuxuuna tagayaa Sarajevo 18: 23h. Safarka soo noqoshada wuxuu ka tagayaa Sarajevo agagaarka 10:21 wuxuuna imaanayaa Zagreb 19:42. Tigidhada waxay ku kacayaan 30 euro hal waddo (tigidhka soo celinta wuxuu ku kacayaa 50 euro). Tigidhada waxaa laga iibsan karaa xafiiska caalamiga ah ee xarunta tareenka ee Croatia ama Bosnia lacagta gudaha. Ma jiro baabuur wax lagu cuno oo waddadan maraya - waxaa lagugula talinayaa inaad horay u sii qaadatid sahayda safarka cajiibka ah ee 9hr, in kastoo ragga wata gawaarida yar yar ay marmar dhex socdaan tareenka iibinaya cabitaannada fudud ee qaaliga ah iwm.
Ujeeddadu inay tahay inaad iibsato tigidhkaaga kahor intaadan tareenka fuulin. Haddii aadan wax iibsan ka hor intaadan fuulin ka dibna ka iibso kirishbooyga dusha sare laakiin ka taxaddar inuu isagu / iyadu kaliya kuu iibin karo tigidh qaybtiisa / safarkiisa - shaqaalaha iyo tareennada ayaa badiyaa isbeddela marka tareenku ka baxo dhulka Croatia iyo mar kale marka tareenku ka baxo dhulka loo yaqaan 'Republika Srpska' ee uu ku soo galo Federaalka.
Tigidhada gaarka ah
Ku safridda Bosnia waa suurtagal Interrail-pass. Boosniya, dalal kale oo Balkans ah & Turkey sidoo kale leh Balkan Flexipass.
Ugu safri Bosnia iyo Herzegovina baabuur
Bosnia waa waddan qurux badan oo baabuur lagu dhex wado; muuqaalka muuqaalka badanaa waa mid qurux badan.
Muuqaalka wadada weyn ee M20 - daawo lo'da!
Si kastaba ha noqotee, dhulka buuraleyda dartiis, darawalnimada foosha xun ee ay adeegsadaan dad badan oo wadooyin ah (oo ay ku jiraan halista wadooyin waaweyn oo cariiri ah), iyo guud ahaan xaaladaha waddooyinka oo xun waddanka oo dhan, ha fileynin in xawaaruhu dhakhso u dhici doonaan - gaar ahaan marka la fiiriyo masaafo aad u yar ' duqsiyo '. Laga soo bilaabo 2009, jidadkii waaweynaa ee ka imaan jiray xeebta ee mari jiray Mostar ilaa Sarajevo, iyo waqooyiga ka socda Sarajevo ilaa xadka Croatia ee Slavonski Brod / Slavonski Samad, waa la soo celiyey waana kuwo aad u tayo wanaagsan. Waddo cusub oo raacda waddadan ayaa socota, qaybta koowaad ee woqooyi ka xigta Sarajevo si fudud ayaa loo heli karaa, in kasta oo dhismaha qaarkood laga yaabo inuu gaabiyo gaadiidka dhammaad kasta oo ka mid ah wadadan weyn ee la saadaalinayo. Laga soo bilaabo dhinaca Sarajevo waa inaad bixisaa lacag dhan 2 km gaariga rakaabka. Waababkii lacagta lagu bixin lahaa ee dhinaca kale ee ka soo horjeedka ah sida 2011 Ogosto ayaa la rakibay mana shaqeynayaan.
Markii la dhammeeyo, wadadani waxay isku xiri doontaa qaybta woqooyi ee Croatia iyo xeebta iyo sidoo kale waddada weyn ee cusub ee ka timaadda Zagreb ilaa Split, taas oo aakhirka u gudbi doonta Dubrovnik.
Saldhigyada shidaalka way adkaan kartaa in laga helo meelaha qaar - badanaa meelaha ugu fiican ee la buuxiyo waa cirifka magaalooyinka iyo magaalooyinka halkii laga heli lahaa.
Isgoysyada soohdintu caadi ahaan waxay keenaan dhibaatooyin yar.
Farsamoyaqaannada ku hadla Ingiriisiga ayaa laga yaabaa inay adkaato in la helo, iyo shatiyeynta waxay noqon kartaa arrin si loo hubiyo in laguu oggolaaday inaad dhab ahaantii halkaas ku kaxeyso. Booliisku waxay si joogto ah u dhigaan jidgooyooyin waddada layaabna ha noqonin markii laguu jiido si loo hubiyo waraaqahaaga oo aad la sheekaysatid!
Kireysiga gaariga sidoo kale waa ikhtiyaar, gaar ahaan haddii aad booqaneyso meelo fogfog oo ka baxsan Sarajevo.
Basasku way badan yihiin gudaha iyo hareeraha Bosnia.
Basaska ugu badan ee caalamiga ah waxay yimaadaan xarunta basaska ugu weyn ee Sarajevo (autobuska stanica) kaas oo ku yaal agagaarka saldhigga tareenka ee u dhow Xarunta Sarajevo. Dhowr bas oo ka yimid Belgrade, hay'adda Republika Srpska iyo Montenegro ayaa adeegsada Lukavica istaanka basaska ee Istočno (Bariga) Sarajevo (xaafada Seerbiya ee magaalada).
Adeegyada tababaraha ee joogtada ah waxay ka socdaan Sarajevo illaa:
Croatia: Zagreb (4 maalin kasta), Kala (4 maalinle), Rijeka iyo Pula (maalinle), iyo Dubrovnik (maalin kasta 6:30 AM)
Serbia: inta udhaxeysa Belgrade iyo (bariga) Sarajevo waxaa jira 5 adeeg maalinle ah, sidoo kale waxaa jira adeeg maalinle ah oo loo maro saldhiga weyn ee Sarajevo
Slovenia: Ljubljana (maalinle)
Montenegro: Kotor maalin kasta (safarku waa 7 saacadood wuxuuna leeyahay aragtiyo cajaa'ib leh)
marka lagu daro basaska masaafada dheer ee sii fogaada ee waqooyiga Macedonia, Austria iyo Germany.
Laga soo bilaabo Mostar, Banja Luka, Tuzla iyo Zenica sidoo kale waa adeegyo caalami ah oo isdaba joog ah. Herzegovina sidoo kale waxay leedahay adeegyo basas badan oo ka yimaada magaalooyinka xeebta Dalmatian ee Croatia.
Adeegyada basaska caalamiga ah waxay had iyo jeer ku jiraan tababarayaal casri ah, oo raaxo leh oo 5-xiddig leh - waxa kaliya ee ka reeban tan ayaa ah basaska maxalliga ah ee wax yar ka shaqeeya xadka (ugu badnaan 3 saac safar).
Dagaalkii Bosnia 1990s awgood waxaa jira shirkado basas ah oo u adeega qurba joogta Bosnia, kuwaas oo bixiya hab jaban oo nadiif ah oo ay ku aadaan qaaradda kale ee qaaradda Yurub.
Centrotrans, Waxay ku saleysan tahay Sarajevo (basaska waxaa looga shaqeeyaa boosteejooyinka basaska caadiga ah ee wadanka),, fax: +387 33 46 40 40. Centrotrans waxay u shaqaysaa Yurub ilaa Austria, Belgium, Croatia, Danmark, France, Germany, Montenegro, Serbia iyo Slovenia.
Globtour (Waxay ka howlgashaa Međugorje, iyadoo loo marayo dalka oo dhan),, fax: + 387 36 653 251. Basaska joogtada ah ee taga Jarmalka, Austria, Sweden iyo Croatia.
Booqashooyinka nuska ah,, fax: + 32 36 638699. Wadashaqeynta Eurolines iyo Centrotrans, basas dhowr ah usbuucii oo taga Biljam iyo Nederland Tigidhka ka soo noqo € 137.
Safarada Dahabka,, fax: + 387 32 444 961. Basaska taga Beljam, Netherlands, Luxembourg iyo Switzerland. Tigidhka ka soo noqo € 100.
Dalxiis Sare,, fax: +387 51 32 11 00. Basaska usbuuclaha ah ee ka yimaada kana taga wadamada Waqooyiga Yurub (sida Danmark, Sweden, Norway) Tigidhada waxaa lagu bixin karaa baska, laakiin ballansiinta hore iyo bixinta ayaa lagula talinayaa. Sarajevo iyada oo loo marayo Salzburg (laba jeer usbuucii) c. DKK1,000 (KM280, € 140) soo celin.
Doonida ugu raac Bosnia iyo Herzegovina
Doomaha waxaa laga heli karaa Neum ilaa magaalooyin kale oo ku yaal Adriatic ee isku xira Croatia iyo dalal kale. Ma jiraan maraakiib caalami ah oo mara Adriatic ilaa Italy, laakiin kuwani waxay ka shaqeeyaan Dubrovnik iyo Split.
Sidoo kale gaadiid ayaa laga heli karaa hareeraha wabiyada iyo harooyinka, kuwaas oo qaarkood si gaar ah loo maamulo.
Xuduudaha udhaxeeya Federaalka iyo Republika Srpska lama xakamayn karo asal ahaanna kama duwana xuduudaha gobolka Mareykanka tixgalinta safarka.
Habka ugu wanaagsan ee lagula wareegi karo gaadiidka dadweynaha waa baska iyo tareenka (Xiriirka, RS). Waxaa jira shabakad cufan oo qadadka basaska ah, dhammaantoodna waxaa iska leh shirkado yar yar oo gaar loo leeyahay. La soco haddii aad ku iibsato tigidh laabasho qadka ay u adeegaan shirkado badan, waxaad safarka ku laaban kartaa oo keliya shirkadda aad tikidka ku iibsatay.
Tareenadu ma badna waana gaabis. Khadad tareen oo badan ayaa ku dhaawacmay dagaalka, welina dib looma dhisin. Waxa kale oo jira gaadiid la’aan iyo tareenno lagu bixiyo adeegyo badan - xitaa khadadka mashquulka badan sida Mostar-Sarajevo, Tuzla-Banja Luka iyo Sarajevo-Banja Luka. Si kastaba ha noqotee, raacitaanadu waa muuqaal, gaar ahaan Mostar-Sarajevo oo fidsan.
Hitchhiking waa ku raaxeysi Bosnia maxaa yeelay waxaad ka heli doontaa raacitaanno dadka maxalliga ah oo aadan wax badan kala kulmi doonin shabakadaha isweydaarsiga martigelinta ee loo yaqaan 'couchsurfing'. Si kastaba ha noqotee ka taxaddar miinooyinka dhulka lagu aaso, oo haddii aadan hubin, sii joog wadada laamiga ah, oo weydii dadka deegaanka (“MEE-ne?”).
Baaskiil wadistu way ku qurux badan tahay Bosnia. Gaadiidka kale looma isticmaalo sida loola xiriiro baaskiilada jidka ay ku socdaan, in kastoo.
Khariidadaha Google, oo ah khariidad khariidaynta khadka tooska ah, ayaa aad looga bartay Bosnia. Si kastaba ha noqotee, mutadawiciin ayaa khariidad ka samaynaya Bosnia Khariidadda Wadada Furan, iyo ugu yaraan khariidadaha magaalooyinka waaweyn ee Bonia waxay leeyihiin faahfaahin aad u badan oo ka badan kuwa khariidadaha shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka.
Haddii aad raadineyso khariidado ciidan oo faahfaahsan, waxaad ka heli kartaa liistada goobta ciidanka:
Luuqadaha rasmiga ah ee Bosnia iyo Herzegovina waa Bosnian, Buugga weedho Serbiya iyo buug weedho Croatian ah, dhammaantood saddexda waxaa loo yaqaan Serbo-Croatian maadaama ay isku dhaqan yihiin isku af. Serbo-Croatian waxay ku qoran tahay labada Laatiin iyo Cyrillic labadaba, taas oo ka dhigaysa luuqada kaliya ee Slavic ee si rasmi ah u adeegsata labada qoraalba. Republika Srpska waxaad ku arki doontaa calaamadaha Cyrillic, sidaa darteed qaamuuska Serbian-English-ka ayaa halkaas ka caawin doona.
Kala duwanaanshaha luqadda Serbo-Kroatiyaanka waxay ku kala duwan yihiin oo keliya meelaha ugu aqoonta badan ee goobaha iyo sidoo kale guryaha caadiga ah. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo luuqada ah oo kuyaala aagga oo dhan iyo isbedelka luuqada laguhadlo ee udhaxeeya gobolada. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshaha ereyadu waa kaliya qurxin oo aan caqabad ku noqon doonin xiriirka u dhexeeya Muslimiinta Bosnia, Katooliga Katooliga iyo Serbiyiinta Orthodox.
Dad badan oo reer Bosnia ah waxay ku hadlaan Ingiriis, iyo sidoo kale Jarmal sababo la xiriira qoysaskooda iyo sidoo kale dalxiiskii Yugoslavia-kii hore dagaalka ka hor. Qaar ka mid ah dadka waayeelka ah ayaa sidoo kale awooda inay ku hadlaan Ruush, maadaama lagu baray iskuuladii xilligii shuuciyadda. Luqadaha kale ee yurubiyanka ah (tusaale, Faransiis, Talyaani, Griig) waxaa ku hadla oo kaliya shaqsiyaad waxbartay oo aqoon yar.
Daawashada Boosniya iyo Herzegovina
Starikii caanka ahaa ee caanka ahaa si qurux badan ayaa dib loogu soo celiyey.
Haddii Bosnia iyo Herzegovina ay kaa dhigto inaad ka fikirto qaab dhismeedka shuuciga ee la taaban karo ama sawirrada 1990-yadii Xarumihii magaalada ee dagaalku burburiyey oo ay laba jibaarmeen khilaafaadka qowmiyadeed, waxaad ku jirtaa la yaab wacan. Dabcan dalkan wuxuu xambaarsan yahay astaamihii taariikhdiisa qallafsan, laakiin booqdayaasha maanta waxay helaan dib -u -dhis iyo magaalooyin taariikhi ah oo si fiican loo soo celiyey, jawi diiran oo soo dhawayn leh, nolosha magaalada oo mashquul badan iyo - guud ahaan- dheeraad ah taallo dhexe ka badan guryaha guryaha hantiwadaagga. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah haraagii xilligii Communist, sida Tito bunker oo u dhow Konjic, waxay noqdeen soo jiidasho iyaga u gaar ah.
Soo -booqdaha ugu weyn ee dalku wuxuu sawiraa si kastaba ha ahaatee wuxuu ku yaallaa Xarumaha taariikhiga ah ee soojiidashada leh, goobihii hore ee dhaxalka iyo dabeecadda quruxda badan. Caan ah Sarajevo waxay leedahay qaar ka mid ah mashaariicda ugu ballaaran ee guryeynta hantiwadaagga, laakiin sidoo kale waa isku-dhaf taariikhi ah oo midab leh oo isugu jira Bariga iyo Galbeedka, halkaas oo diimaha iyo dhaqammadu ku wada noolaayeen qarniyo. Waa magaalo firfircoon oo ku soo noolaatay sidii ay waligeed ahayd; caasimada casriga ah ee dalka, oo ku faana hidaheeda iyo meel caan ah oo loogu talagay socdaalayaasha noocyadooda kala duwan. Indhaha ugu sareeya waxaa ka mid ah kuwa nool Baščaršija ama Old Bazaar, the Katidralka Sarajevo, ka Gazi Husrev-beg Masaajidka iyo dabcan xarumaha isboortiga ee dhaxalka leh ee Olimbikada 1984. Sidoo kale xiiso leh waa Tunel spasa, ama tunnelka rajada, kaas oo sahay u keenay dadka reer Sarajevo ee dagaalka oo hadda ah matxaf. Magaalada quruxda badan ee jir Inta badan waa jawharad kale oo magaalo ah, oo caan ku ah Unesco World Heritage oo ku taxan Stari badankood buundada oo ah astaamaha ugu muhiimsan. Si taxaddar leh dib loogu dhisay, waxaa si ballaaran loogu aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee naqshadaha Islaamka ee Balkans. Višegrad waxay leedahay buundo ku taxan Unesco oo u gaar ah, kuwaas oo ah kuwa cajiibka ah Mehmed Paša Sokolović Bridge. Si aad u hesho weynaan magaalo, iskuday jardiinooyinka cagaaran iyo waddooyinka Banja Luka. Ugu dambeyntiina, qaybaha ugu badan ee dhaxalka adduunka Stećci Medieval Tombstones Xabaal-wadaha (xabaalihii qurxiyay ee qarniyadii dhexe) waxay ku yaalliin Bosnia iyo Herzegovina.
Soojiidashada dabiiciga ee weyn waxaa laga heli karaa hareeraha, xitaa ku dhow magaalooyinka waaweyn. Gaadhi faras u qaad Vrelo Bosne (guga wabiga Bosna) si uu ugu biiro qoysaska Sarajevo si ay ugulaabtaan xasilloonida iyo xaraashka. Ku biyo-dhacyada Kravice, oo qiyaastii 40km u jirta Mostar, u samee safar kale oo dabiici ah oo cajiib ah. Meel caan ah oo loogu talagalay dadka deggan magaalada iyo qulqulatooyinka, biyaha Webiga Trebižat waxay ku dhacaan illaa 30 mitir goob dabiici ah oo qurux badan oo ah darbiyada tuff. Roob-biyoodyo kale oo riwaayado ah ayaa laga heli karaa galbeedka fog ee dalka, oo ah dhul-cagaaran Beerta Qaranka Una. Ka dibna dabcan, waxaa jira kuwa caanka ah Jajce biyo-dhac, halkaas oo biyaha nadiifka ah ee wabiga Pliva ay 17 mitir hoos uga dhacaan bartamaha magaalada. Dabeecadaha jecel dabeecadda sidoo kale waxay rabaan inay ku daraan Hutovo Blato Park Park oo loogu talagalay daawashada shimbiraha ama Sutjeska National Park, oo leh biyo-dhac iyo sidoo kale mid ka mid ah laba haray kaymaha primeval Yurub.
Xulashada ugu sareysa nolosha tuulada waxaa laga heli karaa daarta taariikhiga ah Počitelj, Blagaj (halka aad sidoo kale ka heli doontid guga webiga Buna) ama, aqoonyahannada deegaanka, Zelenkovac ecovillage oo u dhow Mrkonjić Grad. Meel ka baxsan Radimlja ayaa ah ururinta ugu weyn ee Stećak, nooc la yaab leh oo ka mid ah qabriyadihii hore ee Cusmaaniyiinta oo laga dhex helay Boqortooyadii hore ee Bosnia.
Waxa laga qabanayo Bosnia iyo Herzegovina
Ku fuulashada webiga Neretva, webiga Una iyo Tara ee webiga Drina, oo leh koorsooyin gaagaaban oo ku saabsan webiga Krivaja, webiga Vrbas iyo wabiga Sana.
Tartankii aduunka ee 2009 waxaa lagu qabtay Banja Luka ee wabiga Vrbas iyo Foča ee Drina, labadaba RS.
Kayaking iyo doonida
Wabiga Neretva iyo qaybtiisa Trebižat, webiga Unac, sidoo kale webiga Krivaja iyo webiga biyo salka ku haya ee Bioštica ayaa ah meelaha ugu badan ee laga raaco kayak leh biyo fara badan oo webiga Krivaja ah. Wabiga Pliva iyo harooyinkiisa Veliko iyo Malo ayaa ah goobo doomo aad u fara badan, sidoo kale webiga dhexe iyo hoose ee Una, webiga Trebižat.
Caanka caanka ah ee Rakitnica ee webiga Rakitnica, oo ku tiirsan webiga Neretva, ayaa bixiya tacabur aad u weyn, laakiin xitaa dariiqa marin-u-socodka ah ee xad-dhaafka ah waxaa laga heli karaa webiga Bjela oo ah qayb kale oo ka mid ah webiga Neretva. Webiga Unac iyo webihiisa waxay bixiyaan waddo marin biyood oo weyn.
Sidoo kale u dhow Banja Luka waxaad sahamin kartaa dariiqyada wabiyada Svrakava iyo Cvrcka.
Cayaaraha ayaa caan ka ah dalka, halka dhulka buuraleyda ah ee dalka uu ku sii kordhayo caan ku noqoshada rookayaasha adduunka oo idil.
Bobsleigh wuxuu ka socdaa Sarajevo 1984 Olombikada Jiilaalka illaa 2017
Bosnia iyo Herzegovina waxay ahaayeen martigaliyaashii 1984 ee Ciyaaraha Olimbikada Jiilaalka, walina waxay ku faantaa kartideeda cayaaraha jiilaalka. Gaar ahaan agagaarka Sarajevo waxaa ku yaal goobo adag. Intii lagu gudajiray dagaalkii sagaashameeyadii meela badan oo Olambik ah ayaa si aad ah loo saameeyay, laakiin waqtigan xaadirka ah wax walba ayaa loo diyaariyey si loo siiyo mootada khibrad weyn.
U dhow Sarajevo waxaa ku yaal Bjelasnica, oo leh in ka badan 8 km oo wadiiqooyin baraf ah, Jahorina (20 km) iyo Igman buuro. U dhow Travnik waa Buurta Vlasic oo leh 14 km. Goobaha kale ee loo dalxiis tago waa Blidinje, Vlasenica ee bariga iyo Kupres oo ku taal Galbeedka Bosnia.
Bjelašnica iyo Jahorina sidoo kale waxay u qurux badan yihiin socodka xagaaga.
Baaskiilku waa ku weyn yahay dabeecadda aan la ogaan ee BiH. Buug-tilmaame wanaagsan ayaa ah quruxda la hilmaamay: hagaha hagaha ee Bosnia iyo Herzegovina ee mitirka 2000 - iyo waxyaabo kale oo xiisaha leh oo uu soo xushay Matias Gomez.
Aagagga ugu kalluumeysiga badan ee Boosniya waxay ku yaallaan Waqooyi-Galbeed ee Bosanska Krajina, gudaha Beerta Qaranka “Una”, iyo hareeraha webiga Sana. Fanaaniinta kalluumaysiga duuliyuhu waxay ku tegi karaan dalxiis meelo kala duwan oo kalluumaysiga ah oo ku yaal webiga Una, Klokot, Krušnica, Unac, Sana, Bliha, Sanica, Ribnik, Vrbas, Pliva, Janj, Sturba, Trebižat, Buna, Bunica, Neretva, Tara, Sutjeska, Drina, Fojnica, Bioštica, Žepa, iyo wabiyaal iyo durdurro kale oo badan; Xarumaha ugu caansan waa Konjic, Glavatičevo, Tjentište gudaha Beerta Qaranka “Sutjeska”, Foča, Goražde, Bosanska Krupa, Bihać, Martin Brod, Drvar, Ribnik, Ključ, Sanica, Sanski Most, Šipovo, Jajce, Livno, Blagaj. Magaalooyinkaas dhowr ah waxaa ku yaal goobo dalxiis oo si gaar ah ugu wajahan baahida xaglaha.
Wax ka iibsiga Bosnia iyo Herzegovina
Lacagta rasmiga ahi waa tan konvertibilna marka (ama summad) (calaamadda la beddeli karo), oo lagu muujiyey astaanta “KM”(Lambarka ISO: BAM). Waxay kuxirantahay euro-ga heerka saxda ah ee 1.95583 ee € 1.
Waxaa jira laba nooc oo waraaqo lacag ah, oo leh naqshado u gaar ah Federaalka iyo Jamhuuriyadda Srpska. Si kastaba ha noqotee, labada qayboodba waxay ka shaqeynayaan meel kasta oo dalka ka mid ah.
Kahor intaadan dalka ka bixin, hubso inaad ku beddesho lacag kasta oo aan la isticmaalin wax ka badan (yuuro, doollar) maadaama waddammada kale badankood aysan is-dhaafsan doonin calaamadaha waddankan lagu beddeli karo.
Kaararka amaahda si weyn looma aqbalo - ATM-yada waxaa laga heli karaa magaalooyinka ugu badan (Visa iyo Maestro). Isku day inaadan ku bixin biilasha KM100, maxaa yeelay dukaamada yar yar waxaa laga yaabaa inaysan haysan isbeddel ku filan.
Inta badan magaalooyinka iyo magaalooyinku waxay lahaan doonaan suuqyo iyo qiimayaal halkaas oo niman farsamo yaqaanno ah, kuwa wax iibiya, iyo kuwa wax iibiyaba ay ku deeqi doonaan nooc kasta oo kayd ah. Cunnooyinka kala duwan ayaa si fudud loo heli karaa, ha ahaadeen kuwo cusub iyo kuwo karsan, iyo sidoo kale dhar, dahabka iyo xusuusta. Suuqyada waad awoodaa inaad kula gorgortanto iibiyaha, in kasta oo ay taasi qaadan karto xoogaa tababar ah. Sida inta badan goobaha noocan oo kale ah sicir bararka ayaa laga yaabaa ajaanibta iyadoo lagu saleynayo 'tijaabo macnaheedu yahay' dhaqso ah oo uu iibiyuhu sameeyay. Badanaa kuwa umuuqda inay awoodaan waxbadan waxaa laga codsan doonaa inay bixiyaan waxbadan.
Waxaad ka heli doontaa Xarumo wax -iibsi oo waaweyn magaalooyinka iyo tuulooyinka badankood.
Sarajevo way kufiican tahay iibsashada dharka iyo kabaha tayada jaban ee qiimo jaban. Wadooyinka waaweyn ee laga dukaameysto ee Sarajevo sidoo kale waxay ku fiican yihiin alaabada suuqa madow oo ay ku jiraan DVD-yadii ugu dambeeyay, ciyaaraha fiidiyowga iyo CD-yada muusikada. Inta badan dalxiisayaasha booqda Sarajevo shaki kuma jiro inay la baxaan dhowr DVD si ay guryahooda ugulaabtaan.
Visoko iyo gobolka dhexe ee Bosnia ayaa si aad ah loogu yaqaan maqaar saarka.
Banja Luka waxay leedahay toddobo goobo ganacsi oo waaweyn, iyo waliba ganacsiyo yaryar oo fara badan, waxaadna awoodi doontaa inaad hesho alaabo badan oo kala duwan.
Mostar waxay leedahay suuq aad u wanaagsan oo laga dukaameysto oo ku yaal dhinaca Croatian-ka oo leh qaar ka mid ah dharka yurubiyanku caanka ku yihiin iyo dukaamada dahabka.
Dukaameysi cashuur la’aan ah
Haddii aad leedahay degenaansho ku meel gaar ah (dalxiis) oo aad soo iibsato alaab ka qiimo badan KM100 waxaad xaq u leedahay canshuur celinta PDV (VAT). PDV waxay ka kooban tahay 17% qiimaha wax iibsiga. Soo celinta waxay khuseysaa dhammaan badeecadaha la iibsaday saddex bilood gudahood ka hor bixitaankooda, marka laga reebo batroolka, aalkolada ama tubaakada. Dukaanka, weydii shaqaalaha foomka soo celinta canshuurta (PDV-SL-2). Ha lagu buuxiyo oo lagu shaabadeeyo (waxaad u baahan tahay kaarkaaga aqoonsiga / baasaboor). Markaad ka tagto BiH, caadooyinka Bosniya ayaa xaqiijin kara (ku dhufan kara) foomka haddii aad tusto alaabada aad iibsatay. Soo celinta PDV ee Marks waxaa lagu heli karaa seddex bilood gudahood, ama isla dukaankii aad ka soo iibsatay alaabada (markaa cashuurta waa laguu soo celin doonaa isla markiiba), ama adoo dhajinaya risiidhka la hubiyey oo ku soo celi dukaanka, oo ay la socdaan lambarka koontada ee ay tahay in lacagta laguu soo celiyo.
La soco in markii aad soo gasho wadan kale ay waajib kugu noqon doonto inaad VAT ka bixiso alaabada laga soo dhoofiyo Bosnia. Laakiin had iyo jeer waxaa jira qaddar bilaash ah, inta badan dhowr boqol oo euro; EU: € 430. Sidoo kale, habraaca xadka ayaa laga yaabaa inuu qaato waqti yar, marka caqli-gal ma aha inaad tan isku daydo markaad ku safreyso tareen ama bas, ilaa darawalku ogolaado inuu sugo mooyee.
Meesha laga cuno Bosnia iyo Herzegovina
Cevapi oo leh rooti iyo basasha la jarjaray
Cuntada ugu badan ee laga heli karo Sarajevo waa Cevapi (caadi ahaan 2-4 km), kebab meel kasta oo lagu yaqaan Balkan. Laba kala duwanaansho caan ah ayaa jira - "Banja Luka" Cevap, kebab weyn oo leh qaab laba jibbaaran, iyo Sarajevo Cevap, yar iyo wareeg. Haddii aadan horey u haysan, booqde kasta waa inuu isku dayaa amar Cevapi ugu yaraan hal mar. Waxaa jira kala duwanaansho dhowr ah pita (kudhowaad 2 km). Cunto fudud oo raqiis ah, dhadhan fiicanna leh oo la heli karo waa "Burek", keega oo ka samaysan cajiinka filo oo hilib lagu buuxiyey (si fudud Burek), jiis (Sirnica), isbinaajka (Zeljanica), baradhada (Krompirusa) ama tufaax (Jabukovaca). Tusaalooyinka qaarkood ayaa ka fiican kuwa kale, hase yeeshe, waxayna noqon kartaa arrin dufan leh. Haddii aad tagto Mostar, si kastaba ha noqotee, isku day inaad soo qaadatid saxan kalluun ah ("pastrmka," oo u eg "pastrami"), oo ah takhasuska maxalliga ah (makhaayad gaar ah oo wanaagsan oo u adeegta kalluunka maxalliga ah ee been abuurka ah ee ku taal monastery Blagaj a baska gaaban ka raaca Mostar).
Cuntada maxalliga ah way ku culus tahay hilibka iyo kalluunka, waxayna ku fududahay beddelka khudradda. Xitaa dhaqamada loogu yeero suxuunta khudradda sida digirta ama Grah waxaa lagu kariyaa hilib doofaar ama hilib sigaar ah. Cunnooyinka badanaa waxaa ku jira hilib laakiin waa la abuuri karaa la'aantiis. Cunnooyinka bariiska iyo baastada ayaa si fudud loo heli karaa oo maraqa dhanaan ee maraqa laga buuxiyo oo la yiraahdo Trahana ayaa lagu sameeyaa inta badan gobollada waana cunno inta lagu jiro soonka bisha Ramadaan. Cunnada degdegga ah, marka laga reebo cevapi iyo pita (ama burek) waxay ka kooban tahay, sida qaybaha kale ee Yurub, pizza, hamburgers iyo eyda kulul. Sandwich-ka Panini waxaa laga helaa inta badan meheradaha qaxwada ee ay caanka ku yihiin dhalinyarada, qaxwaha Bosnian-ka, oo xusuusta kafeega Turkiga, ayaa ah mid loo baahan yahay in lagu daydo wixii qaxwo ah Caadi ahaan, marka laga reebo xulashooyinkaan cuntada degdega ah, makhaayadaha Bosnia waxay u adeegaan takhasusyo yar oo reer Bosnia ah - waxa dadku ku cunaan guryahooda aad ayey uga duwan yihiin waxa ay cuni doonaan haddii ay aadaan makhaayad.
Janjetina, wankii dubay
Dhamaan waddooyinka Bosnia iyo meelaha madadaalada, waxaad ku arki doontaa xayeysiis janjetina ama "Wan candhuuf ku tufay." Tani waa daaweyn aad u dhadhan fiican leh, oo badanaa loogu talagalay munaasabadaha gaarka ah. Wan dhan ayaa lagu kariyey candhuuf, isagoo ku rogrogmaya dabka dhuxusha muddo dheer. Markaad dalbato, waxaad ku bixinaysaa kiiloogaraam, oo qiimihiisu yahay qiyaastii KM25 (ma xuma maxaa yeelay tan ayaa ku filan dhowr qof). Mararka gaarka ah qoysaska waxay guriga ku dubtaan waxyaabaha noocaas ah.
Macno malahan cunnada aad dalbatid, waxaa lagugu qasbayaa in lagugu siiyo rooti, ​​badanaa lagu cuno dhammaan qeybaha Yurub oo leh dhammaan cuntooyinka macaan. Labada maraq iyo saladhba waxaa badanaa la siiyaa subag, digaag & maraq lo'da oo leh baasto ama ukumo yaryar oo ah kuwa ugu badan. Saladyadu caadi ahaan waxay ka kooban yihiin yaanyo isku qasan, salaar, basasha iyo basbaas dawan, oo inta badan leh jiis diiran. Salad Kaysar ah lagama maqal Bosnia, guud ahaanna vinaigrettes badankoodu waa noocyo Talyaani ah, khal balsamic iyo saytuun ama saliid hadhuudh ah. Waxaad sidoo kale la kulmi kartaa udgoon badan. Ajvar waa qasacadaysan (ama guri la sameeyay haddii aad nasiib leedahay) faafay, wax la mid ah faafidda bruschetta, oo ka samaysan basbaas duban & ukunta, kuwaas oo dhulka ku jira kuna cusbaynaya basbaas iyo milix isla markaana si gaabis ah loo kariyo. Cunnooyin badan oo la shiilay ayaa sidoo kale loo sameeyaa udgoon, sida basbaas la dubay, basasha, qajaarka [“pickles”], iyo yaanyada. Kajmak waa faafitaanka caanaha, oo leh isku dheelitirnaan iyo dhadhan sida jiiska kareemka. Waxay ka samaysan tahay dufan caano ah, oo laga saaro, la cusbayn karo oo qasacadaysan. Waxay leedahay dhadhan, dhadhan farmaajo cusbo leh, oo leh qaab xoogaa ka qalalan farmaajo. Kajmak oo ka socda Travnik waa takhasus maxalli ah waxaana loo dhoofiyaa illaa iyo inta Australia.
Cuntada Boosniya guud ahaan iskuma daraan cunnooyinka macaan & kuwa macaan, waligoodna kama hor imaan doontid wax la mid ah salad Kaysar leh liin macaan. Dhinaca kale, qaar badan oo ka mid ah kuugga wanaagsan ayaa tijaabin doona dhadhan macaan oo macaan sida 'Medeno Meso' (Hilib Honeyed) oo lagu sameeyay dagaalkii ka hor Banja Luka oo uu sameeyay kuugga caanka ah. Kala soocida udhaxeysa miraha iyo khudaarta waa mid xoogan, oo miraha loo isticmaalo kaliya suxuunta nooca macmacaanka ah. Weligaa ma kulmi doontid saxan kasta oo sonkor lagu daro mooyee inay macmacaan mooyee. Cunnadu guud ahaan way ku culus tahay wax soo saarka cusub, oo u baahan in yar ama aan lagu darin uunsi. Sidan oo kale, waxaa jira dhowr suxuun oo basbaas ama kulul, iyo suxuunta loo xayeysiiyo "basbaas", sida stews sida paprikas or fuudka caadiga ah ee Hangari badiyaa waxaa lagu carfayaa paprika mana ahan qarqaryo, mana qaadaan xanaaq daran. Gobollada qaarkood, waxayna kuxirantahay hadday tahay makhaayad ama cuntada guriga, qaabab iyo midabbo ayaa muhiim noqon kara sidoo kale.
Ku qor banaanka maqaayada Sarajevo
Hilibka sigaar cabbin waa cunnada Bosnian-ka, taas oo ka badan cuntooyinka khaldan ee loo yaqaan 'pita & cevapi'. Dadka aan Muslimka ahayn, xeerarka doofaarka, iyo cibaadaysiga, qoorta oo la cabbo, feeraha la cabbo, hilibka doofaarka iyo boqolaal nooc oo sausage ah oo la cabbo ayaa ka dhigaya waddan BBQ dhab ah. Muslimiintu, dabcan, waxay leeyihiin wano isku mid ah oo dhadhan fiican leh ama hilib lo'aad. Hilibka waxaa loo diyaariyey in marka hore lagu daaweeyo milix dhowr maalmood, taas oo biyaha ka saareysa & qalajisa hilibka, halka milixdu ku badan tahay ay ka ilaalinayso hilibka inuu xumaado. Ka dib markii lagu xoqay dhir udgoon (xoqida qalalan ee Bosnia badanaa waa mid aad u fudud, waxaana ku jira xoogaa isku dhafan oo ah basbaas cusub oo tayo sare leh, paprika kulul, cusbo, basasha & toonta, iyo xoogaa malqacado ah Khudaar, isku dar ah maraq digaag budo ah oo la mid ah cowska dhadhanka ah ee Oxo), hilibka ayaa markaa la sudhaa qiiq culus oo ka dhashay dab xaabo Geedaha miraha waxaa si fiican u yaqaan BBQ aficionados adduunka oo dhan si ay u soo saaraan qiiqa ugu badan ee dhadhanka leh, iyo tufaaxa, cherry iyo geedaha walnut ayaa ah kuwa ugu badan ee lagu isticmaalo Bosnia. Halka hilibka doolarka ee ganacsi ahaan loo soo saaray (nooca aad ka iibsan karto dukaankaaga maxaliga ah) badiyaa waa la qalajiyaa ama lagu laalaadaa qaboojiyeyaasha fuuqbaxa ka dibna markaa cadaadis la cabaa dhowr saacadood si loogu oggolaado dhadhan qaar ka mid ah inuu ku dhex faafo hilibka, Bosniaanka hilibka cabay waxaa si sigaar ah loo cabayaa ilaa seddex bilood. Hilibku wuxuu sudhan yahay “guriga qiiqa,” oo ah foox yar oo alwaax ah oo caadi ahaan weyn oo ku filan in dab la shido oo hilibka la sudho. Dadka reer Bosnia waxay cabi doonaan oo keliya hilibka xilliga dayrta ama jiilaalka, maxaa yeelay heerkulka hooseeya, oo ay weheliso milixda cusbada, waxay u oggolaaneysaa hilibka inuu laalaado bilo bilaa dhib la'aan. Inta lagu jiro waqtigan, waa la cabayaa ilaa 4 jeer asbuucii, mudo ah 8-10 saacadood markiiba, taas oo hilibka ku shubeysa dhadhanka qiiqa kana saaraya wixii biyo ah ee haray. Badeecada la dhammeeyay waxay leedahay caraf udgoon oo aad u xoog badan iyo dhadhan qiiqa ah, oo leh cufnaan hilib lo'aad oo jilicsan. Waxay kuxirantahay jarista hilibka, farqiga ugu muuqda ee udhaxeeya hilibka sigaar cabbin qaabkan loo soo saaray iyo hilibka ganacsi ee laga soo saaro Waqooyiga Ameerika, waa midabka hilibka kujira. Halka hilibka doolarku badanaa jilicsan yahay, casaan yahay, wax yar oo qoyan oo si caddaalad ah ceeriin u tahay, hilibka la cabbo ee reer Bosnia waa madow dhammaantiis iyadoo leh wax yar oo casaan ah. Hilib ka waaweyn, sida kuwa Dalmatian prosciutto, waxay u muuqdaan kuwo xoogaa casaan & jilicsan gudaha ku jira, laakiin farqiga ayaa wali ah mid aad uxun, maaddaama Balkan-sameeyaha Balkan-ka uu leeyahay biyo aad u yar, waa ka roon yahay oo guud ahaan sigaar cabbid. Hilibka noocan ah waxaa badanaa lagu cunaa waqtiga quraacda, sandwiches, ama sida meza, cunno fudud oo inta badan loo soo saaro si loogu salaamo martida. Booqdaha, hilibka sigaarka la cabo waa hilib qado jaban oo aan caadi aheyn, waxaana laga iibsan karaa suuqyada Bosnia dadka sida caadiga ah iyagu isu diyaariya. Hayso rooti rooti doofaar leh jiis la cabayay oo reer Bosnia ah iyo saladh yaanyo daray ah oo ku jira roodhida roodhida guriga lagu sameeyo ee nadiifka ah, oo waligaa ma doonaysid inaad baxdo.
Markaad ku booqato reer Bosnia gurigaaga, martigelinta la bixiyo waxay noqon kartaa mid aad u culus. Qaxwada waxaa had iyo jeer la siiyaa xoogaa macaan oo guriga lagu sameeyo, sida rootiyada, buskudka ama keega, oo ay weheliso Meza. Meza waa saxan weyn oo ah hilib la cabiyey oo la diyaariyey, kaas oo badanaa ku jira nooc ka mid ah ham sigaar cabbay (guryaha dhaqameed ee aan muslimiinta ahayn) iyo sausage oo si khafiif ah loo jarjaray oo si quruxsan loogu soo bandhigay farmaajo, ajvar, ukumo adag oo la kariyey iyo yaanyo cusub, qajaarka ama wixii kale khudradda salad. Rooti had iyo jeer waa la bixiyaa. Inta badan buugaagta wax lagu kariyo ee ku saabsan karinta Koonfurta Slavonic waxaa ka buuxa boqollaal nooc oo rooti ah, tani waa mid ka mid ah gobollada ugu rootida-waalan adduunka oo dhan. Hase yeeshe, kaliya nooca roodhida ee inta badan guryaha Bosnia ayaa ah noocyada kala duwan ee Faransiiska lagu iibiyo, taas oo dabcan dadka reer Bosnia aysan waligood ku riyoonayn inay ugu yeedhaan “Faransiis.” Iyaga ahaan, waa wax fudud "Hljeb" ama "Kruh".
Si kastaba ha noqotee, inbadan oo dadaal ah ayaa lagu sameeyaa munaasabadaha gaarka ah si loo soo saaro rootiyada dhaqameed ee Slavonic, qoys walbana sida caadiga ah wuxuu dubtaa kala duwanaanta u gaarka ah ee cuntada caadiga ah. Kirismaska ​​& Ista, Sabtiyada Orthodox & Kroatiyaanka Kaatooligga qoysaskoodu caadi ahaan waxay sameeyaan rootiga-subagga loo yaqaan Pogaca, taas oo inta badan la tolo oo lagu cadaydo ukumo-dhaqid, iyada oo siineysa dhalaal dhalaalaya oo ku habboon miisaska ciidaha cajiibka ah. Inta lagu jiro bisha Ramadaan, dadka ku nool Bosniak (Muslimiinta) waxay duxdaan noocyo badan oo roodhi ah, noocyada gaarka ah iyo kuwa Turkigu u waxyooday guud ahaan way ka tiro badan yihiin, kala duwan yihiin waxayna ku tiirsan yihiin gobollada iyo tuulooyinka marka loo eego dadka Masiixiyiinta ah, halkaas oo cuntada gaarka ah ee dhacdooyinka gaarka ahi ay ka badan yihiin xulashooyin isku mid ah iyo kuwa yar ayaa jira. Lepinja or maahane (rootiga lagu cuno Cevapi) waa nooc rooti fidsan, oo laga yaabo in qaab ahaan ay ugu soo bandhigeen Bosnia dadka reer Turki, laakiin tan iyo markii uu si madaxbanaan u horumarey oo kaliya ayaa si aan mugdi ku jirin u xasuustaa dabaqadda Turkiga ama Bariga Dhexe pita rootiyada. Si ka duwan Giriigga ama Lubnaan pita, kii reer Bosnia Lepinja waa xanaaq iyo kala-bixin gudaha ah oo si qurux badan loogu qurxiyay banaanka, taas oo ka dhigaysa wehel isboorti ah oo hilibka saliida leh iyo dhadhanka dubitaanka. Turkida ayaa laga yaabaa inay bilaabeen cuntadan, laakiin reer Bosnia waxay u qaadeen meel aad u sareysa.
Cunto karinta maalin kasta, dadka reer Boosniya waxay cunaan cunooyin badan oo nooca shiidan ah ah, sida Kupus, saxan kaabash la kariyey; Grah, digirta loo diyaariyey qaab la mid ah, iyo kala duwanaansho caddaalad ah-duufaan ah oo reer Hungary goulash ah. Dhammaantood waxaa lagu sameeyaa toon, basal, celery iyo karootada, oo ay ku xigto khudrad, hilib la cabbo iyo dhowr koob oo biyo ah. Kani waa la kariyaa ilaa khudaarta ay kala daadanayaan. Basbaas maxalli ah oo la yiraahdo "Vegeta" ayaa lagu dhex daray ku dhowaad weel kasta, oo isla xawaashkan ayaa laga isticmaalaa gobolka oo dhan, illaa iyo Poland, waana waqooyiga Ameerika oo u dhigma digaag Oxo ah, ama, haddii si kale loo dhigo, maraq digaag la dubay qas. Noocyada noocan oo kale ah waxay kugu kici doonaan qiimo la'aan, waana cunno aad u fiican oo cunno badan.
Boem šnita keega oo ku yaal Sarajevo
Sida macmacaanka, waxaad ku nasan doontaa jalaatada lagu iibiyo dalalkii hore ee Yugoslavia. Waxaa jira dhowr nooc, laakiin caanaha iyo kareemka gobolku waa inay noqdaan qayb wax ku biirisa dhadhankooda cajiibka ah. Waxaad ka iibsan kartaa jalaatada ama qaadada ama mashiinka barafka caano-barafka leh, oo ku duuban dukaamada ama iibiye hareeraha wadada oo leh qaboojiye wadada taagan. Talinayo waa "Masar”Ice creamery ee Sarajevo, oo caan ka ah gobolka barafka caramel. Sidoo kale isku day "Ledo," nooc ka mid ah jalaatada la soo baakadeeyay ee lagu sameeyay Croatia laakiin lagu iibiyo gobolka oo dhan. Sidoo kale waa inaad isku daydaa macmacaannada maxalliga ah, sida - Krempita, nooc ka mid ah macmacaanka loo yaqaan 'custard / pudding' kaas oo dhadhamiya wax u eg kareem farmaajo, iyo - Sampita, macmacaan la mid ah oo lagu sameeyey ukun cad. Macmacaanada dhaqameed ee reer Bosnia sidoo kale waa wax la isku dayo. Hurmasice or Hurme, waa far far yar oo u eg qaab macaan oo leh iniinta; Tulumbe waa wax la mid ah digaagga jilicsan, jilicsan ee dibadda ah oo jilicsan oo macaan gudaha. Dabcan, ha ilaawin inaad isku daydo Bosnia inay qaadato adduunka caan ka ah baklava, taas oo u muuqata inay xoogaa ka sharoobi karto dhiggeeda Turkiga badanaana kuma jiraan wax ruxan ah, sida dhiggeeda Giriigga ah. Inta badan cunto karinta dhaqameed waxay leedahay hoosta Turkiga, natiijo midab leh oo lix boqol oo sano ah oo maamulkii Cusmaaniyiinta ah inta badan Bosnia & Herzegovina, iyo macmacaanku kama duwana.
Wax kastoo aad ku cuntid Bosnia, waxaad dareemi doontaa hodantinimada dhadhanka aad moodeysay inaad taqaan. Cunnooyinka dalka wali kuma burburin wax soo saarka ganacsiga, sidaas darteed cunnooyinka badankood waa (aan la hubin) si dabiici ah ama qeyb ahaan jir ahaan u koray, iyagoo isticmaalaya kiimikooyin ka yar waxaana la qaadaa markay bislaadaan. Suuqyada khudaarta waxaa lagu iibiyaa khudaarta xilliyada iyo kuwa gudaha lagu beero, waana lagaa doonayaa inaad heysato qaar ka mid ah miraha dhadhaminta ugu fiican ee aad waligaa isku dayday gobolka Neretva Valley ee Herzegovina (oo u dhow xadka Croatia, inta u dhexeysa Mostar iyo Metkovic). Gobolku wuxuu caan ku yahay fanaaniinta, liinta macdanta, basbaaska & yaanyada, jeeriga (noocyada macaan iyo kuwa dhanaan labadaba), qaraha iyo inta badan miraha Kiwi. Jiiska sidoo kale waa mid dhadhan fiican leh oo hodan ku ah guud ahaan Bosnia & Herzegovina, guud ahaanna cuntooyinka oo dhami waa kuwo cusub sida ay helaan. Ku raaxayso!
Aščinica - makhaayad ku taal dukaanka hortiisa oo u adeegta la kariyey (oo lid ku ah dubista ama dubista).
Buregdžinica - waa meel ay suxuunta ugu waaweyn ka buuxaan keega (burek, sirnica, iwm).
Xagee lagu joogayaa Bosnia iyo Herzegovina
Boosniya iyo Herzegovina waxaad ka dooran kartaa kan weyn iyo Herzegovina / tirada hudheelada, hoteelada, hudheelada iyo hawlgabyada. Magaalada Neum oo ku taal xeebta waxaad ka ballansan kartaa hoteelada 2 ilaa 4 xiddigood. Magaalooyinka kale hudheello badan ayaa ah 3 xiddigood, 4 xiddigood qaarna waa 5 xiddigood.
Banja Luka hudheelada ugu fiican waa: Cezar, Palas, Bosna, Atina, Cubic iyo Talija. Boos celintu waa suurtagal internetka ama la xiriirida Zepter Passport Travel Agency, Banjaluka, wixii hoy ah oo ku yaal Bosnia iyo Herzegovina, ama adeeg kasta; la xiriir: http://www.zepterpassport.com, lambarka taleefanka +387 51 213 394, +387 51 213 395, Faksi +387 51 229 852.
Sarajevo hudheelada ugu fiican waa: Hollywood, Holiday Inn, Bosnia, Saraj, Park, Grand iyo Astra. Boos celintu waa suurtagal internetka ama la xiriir guddiga safarka Centrotrans-Eurolines ee Sarajevo, lambarka taleefanka: +387 33 205 481, luuqadaha lagu hadlo: Ingiriis, Jarmal, Faransiis iyo Dutch.
Kaamamku aad uma badna. Dulmarka guud ee xeryaha ku yaal Bosnia waxaa laga heli karaa hay'adda dalxiiska qaranka. Kaamaynta duurjoogta badanaa dhib ma leh, laakiin ka taxaddar miinooyinka.
Iyada oo mid ka mid ah heerka shaqo la'aanta ugu sarreysa Yurub (meelaha qaarkood ilaa 40%, heerka rasmiga ah 17%), lagama yaabo inaad ka hesho shaqo sharci ah waddanka illaa aad u shaqeysid hay'ad dalal badan ka kooban.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Bosnia iyo Herzegovina
Calaamadda digniinta miinada dhulka
Ka taxaddar markaad ka safreyso waddada lagu garaacay ee Bosnia iyo Herzegovina: waxay wali nadiifineysaa in badan oo ka mid ah qiyaastii 5 milyan oo miinooyinka dhulka lagu aaso oo ku haray baadiyaha intii lagu jiray Dagaalkii Boosniya ee 1992-1995. Meelaha baadiyaha ah isku day inaad ku ekaato meelaha laamiga ah haddii ay suurogal tahay. Waligaa ha taaban wax walxaha qarxa ah. Guryaha iyo guryaha gaarka loo leeyahay badanaa waxaa lagu qariyey miinooyin maadaama milkiilayaashoodii ay carareen intii dagaalku socday. Haddii aag ama hanti ay u muuqato cidlo, ka fogow.
Bosnia waxaa ka dhaca fal -dambiyeedyo aad u yar. Xaruntii hore ee Sarajevo, ka digtoonow qaadashada jeebka.
Caafimaadkaaga ku joog Bosnia iyo Herzegovina
Dhammaan shaqaalaha Bosnia waxay maraan baaritaanno caafimaad oo joogto ah si loo hubiyo inay jir ahaan u qaban karaan shaqooyinkooda isla markaana aysan u gudbin doonin wax cudur ah ama aysan dhaawici doonin qof. Dadka ka shaqeeya warshadaha cuntada ayaa si gaar ah loo hubiyaa oo hubin caafimaad iyo badbaado la'aan ah oo ku saabsan dhismaha ayaa badanaa la sameeyaa. Maamulayaasha cuntada iyo bixiyeyaasha waxaa lagu hayaa heerarka ugu sarreeya. Jikada jikada iyo bakhaarrada cuntada waxaa la filayaa inay ahaadaan kuwo fayo-dhawr ah oo aan nadiif lahayn nabadgelyada cunnaduna aad ayey muhiim u tahay.
Biyaha waa la cabi karaa.
Maaddaama cuntadu hodan tahay, jimicsi dheeri ah ayaa ku caawin kara.
Iyo sida kor ku xusan, waligaa ha marin wadooyin loo qoondeeyay haddii miinooyinka dhulka lagu aaso.
Sigaarka meel kasta oo dalka ka mid ah ayaa loo oggol yahay, in ka badan kala badh dadku waxay isticmaalaan tubaakada. Sidaa darteed, u diyaargarow inaad u adkaysato maqaayadaha aadka u qiiqaya, baararka iyo Xarumaha wax iibsiga, iyo sidoo kale xarumo kale. Xitaa darawalada basaska ayaa inta badan sigaar cabba inta ay baabuurka wadaan.
Xushmee kala duwanaanshaha diinta ee dadka ku nool gobolka iyo dadaalkooda si ay uga gudbaan dagaalkii sokeeye ee Yugoslavia. Ka taxaddar meelaha ay weli xiisaddu ka taagan tahay iyo inaad hubiso inaadan ku xadgudbin koox gaar ah.
Sidoo kale, ixtiraam deegaanka. In badan oo dalka ka mid ah, iyo sidoo kale kuwa deriska la ah, ayaa laga reebay wasakhda waana muhiim inaad ka taxaddarto saameyntaada.
Meelaha qulqulka iyo wabiyadu waxay u muuqdaan kuwo kulul, buuraha iyo dooxooyinka badanaa lama ilaaliyo oo cagta lama hubo. Had iyo jeer hayso hage dalxiis ama la tasho maxaliga ah wixii talo ah ee ku saabsan khataraha dabiiciga ah iyo miinooyinka dhulka lagu aaso.
Hay'ad kastaa waxay leedahay u gaar ah adeegga boostada, sidaas darteed tigidhada laga iibsaday Federaalka looma adeegsan karo RS-ka iyo tan kale.
Kaliya waxaa jira seddex shabakad taleefan gacmeed oo kuyaal Bosnia iyo Herzegovina: HT ERONET (Mostar), GSMBiH (Sarajevo) iyo m: tel (Republika Srpska, Banja Luka). Waxaad ka iibsan kartaa kaarka SIM-ka lacag bixinta ah shabakad kasta kiosk kasta oo KM10 ah ama ka yar.
Goobaha Safarka ee Bosnia
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar
Tilmaamaha Safarka Doi Mae Salong Halal